Usuku lomama. Iincwadi ezi-6 zokunika oomama zonke izinto abazithandayo | Uncwadi lwangoku
Usuku lomama. Iincwadi ezi-6 zokunika oomama zonke izinto abazithandayo
NgeCawe ezayo umhla we-7, i Usuku lomama. Kwaye iyaziwa into yokuba kukho umama omnye kuphela, nangona enokuba neencasa ezahlukeneyo xa kufikwa kufundo. Ewe apha kuya kukhethwa Izihloko ezi-6 zoomama bazo zonke iiklasi kunye neemeko, kunye nezinto abazithandayo ukuba mhlawumbi banokwabelana nabo babangqongileyo. Kwaye ukuba akunjalo, siya kuhlala sifuna okufanayo.
Ukusuka kwiiklasikhi ukuya kubathengisi abathengisayo okanye ukusuka kwiikomikhi ukuya kumabali. Ukubanika isipho esifanelekileyo, nangona befanelwe sisinye mihla le.
1 Ezingazinzanga, Mamma yam! -U-Agustina Guerrero
2 Umama - Máximo Gorki
3 Umama eSpain - Miss Puri
4 Ngubani ofuna ukuba ngumama - uSilvia Nanclares
5 Mama, ulungile-uMyriam Sayalero kunye noMarisa Morea
6 Awufani nabanye oomama - UAngelika Schrobsdorff
Ezingazinzanga, Mamma yam! -U-Agustina Guerrero
IArgentina eseSpain, lo mdwebi wegraphic kunye noopopayi benza elinye ixesha elidlulileyo lo mlinganiswa ohlekisayo ofumene impumelelo enkulu kuhlobo olo. Kula maphepha matsha sihamba ngezisithoba sihlekisa iinyanga zokukhulelwa nokuba zithetha ukuthini.
Umama - Mxim Gorky
Kunyaka wokubhiyozela ikhulu leminyaka yoQhushululu lwaseRussia, oku yodidi lifakwe nguMáximo Gorki. Umama iphefumlelwe ziziganeko ezenzeka kumzi-mveliso waseSornovo ngexesha lenguquko ngo-1905.
Yapapashwa ngo-1907, ikakhulu yi inoveli yengcinga apho iGorky yaphuhlisa khona ithisisi eyayisekwe kubusoshiyali. Kwaye wayenza ngokusebenzisa umlinganiswa wakhe ophambili, Pelagia Nilovna, umfazi omdala, semi-ukufunda, umhlolokazi owayephethwe gadalala ngumyeni wakhe kunye nomama womntu osebenza kumzi-mveliso kunye nenkokheli yotshintsho.
Umama eSpain -Nkosazana Puri
U-Miss Puri waye into yokushicilela kunye nayo NDIKUSHIYA UXAKEKILE umva. Apha usixelela Isiqhelo sikamama ngaphandle kokuba uhleli, wenza yonke into emini. Ukongeza, ngoburharha esele sazi, ukwasixelela malunga nendlela umbono ngayo nayiphi na into etshintshayo, ukusuka kunqamaniso oluvakalayo xa udibana nabahlobo kwinto ethethwa sisini xa kukho abantwana ababandakanyekayo.
Ngubani ofuna ukuba ngumama -Silvia Nanclares
Inoveli ebhaliweyo malunga nomfazi owathi, nje ngaphambi kokuba ajike amashumi amane nasemva kokuphulukana noyise, athathe isigqibo sokuzama ukukhulelwa.
Ngokubaliswa kwale nkqubo, umbhali uyayikhupha iimpendulo ezahlukeneyo xa lo mnqweno uphazamisekile: ukungxamiseka kwezinto eziphilayoukungaqiniseki, umoya we ukungachumi, izimvo zakho ezingqongileyo, Nxiba eyakho sibini, i uloyiko, ithuba lokungayifumani kunye nokunxibelelana ne Ukuncedisa ukuvelisa kwakhona. Kwaye konke ngaphandle kokulibala izinto ezintle ebomini: uthando lweqabane lakhe, umama wakhe, okanye uncedo kunye nenkxaso yabahlobo bakhe emva kokusweleka kukayise.
Mama umhle -UMyriam Sayalero kunye noMarisa Morea
Ipapashwe ngo-Epreli odlulileyo, eli bali lijolise kubantwana abaneminyaka emi-4 Ngumnikelo kwabo mama abangabinakho ukugqibelela, kodwa balungile.
UBlanca noLeo abanasikolo kwaye baceba ukuchitha usuku nabahlobo babo… Kodwa umama wabo unezinye izicwangciso: unyanzelise ekuhleleni i-adventure emnandi! Nangona kunjalo, akukho nto iya kuvela njengoko wayecwangcisile, nokuba akukho lonwabo lilahlekileyo.
Awufani nabanye oomama -U-Angelika Schrobsdorff
Yathunyelwa kunyaka ophelileyo, le umthengisi ogqibelele nangoku phezulu kuluhlu. Ngeengcebiso ze Isuti yesiFrentshi ngu-Irene Nemirovsky, umbhali (owazalwa ngo-1927 kwaye usaphila) uyakha kwakhona Ubomi bukanina bokwenyani, Umfazi owazalelwa kwintsapho yoohlohlesakhe bamaJuda eBerlin.
Ukungakhethi buso kwaye ufuna ukutshata igcisa, u-Else uya kufumana ukuzalwa kwehlabathi elitsha ecaleni kwe-bohemian yaseBerlin eyomeleleyo yamashumi amabini egquma. Umama wabantwana abathathu ovela kubazali abathathu abohlukeneyo, uthembekile kwizithembiso ezibini azenzileyo njengebhinqa eliselula: ukuhlala ubomi ngokuzeleyo nokuba nomntwana kuyo yonke indoda ayithandayo. Kodwa kwi elubhacweni Uya kufumana i- inyani eyahlukileyo kakhulu emva kobomi obunikezelwe kumaqela, ukuhamba nothando.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Usuku lomama. Iincwadi ezi-6 zokunika oomama zonke izinto abazithandayo
Uhlalutyo olufutshane lomsebenzi "weCuentos" nguJorge Luis Borges